အောင်ရဲထွေးအမှု ရုပ်သိမ်းခဲ့ခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ အကြောင်းရင်းကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန် နိုင်ငံ? - Yangon Media Group
သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေး အမှုရုပ်သိမ်းခဲ့ခြင်း၏နောက်ကွယ်မှ အကြောင်းအရာများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန် နိုင်ငံ တော်သမ္မတကညွှန်ကြားလိုက် ကြောင်း သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရ ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နံနက်ပိုင်းက နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတအိမ်တော်၌ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့်တွေ့ဆုံကာ အမှုရုပ်သိမ်းခြင်း၏ နောက်ခံအကြောင်းရင်းများ၊ အခြားဆက်နွှယ်ပတ်သက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိတိကျကျစိစစ်ကာ ဥပဒေနှင့်အညီ မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ရန်လမ်းညွှန်မှာကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးဇော်ဌေးက ¤င်း၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
သမ္မတကြီးက အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခြင်းမှာ မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပြုလုပ်မည့် ကော်မရှင်အစည်း အဝေးတွင်ဆွေးနွေးကာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဦးဟန်ညွန့်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။ ”အစည်းအဝေးက ဒီတစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်းလုပ်မယ်။ ပြီးရင် ဥပဒေအတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ သရုပ်ဆောင်အောင်ရဲထွေးအမှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ကနဦးရုပ်သိမ်းခွင့်ပေးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုများရှိနေခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတက တာဝန်ရှိသူများကို လမ်းညွှန်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အမှုကို အမြန်ဆုံး ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ရန်လို ကြောင်း၊ အဂတိလိုက်စားမှုကော်မရှင်အနေဖြင့်လည်း အမြန်ဆုံး စစ်ဆေးကာ ဖမ်းဆီးသင့်သူများကို အမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးရန်လိုကြောင်းတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ပြောသည်။
”အာဏာရှိသူတွေအနေနဲ့ အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပြီး အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးဖို့လိုတယ်။ အဲဒီလိုမှမ ဟုတ်ဘူးဆိုရင် အဂတိမှာ အရင်အမှုတွေလိုပဲ ထွက်ပြေးချိန်ရကုန်မယ်။ ဖမ်းမမိဘဲနေမယ်။ အဲဒီ တော့ပြောချင်တာက အမြန်ဆုံး ဖမ်းမိဖို့လိုတယ်။ အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်စေချင်တယ်”ဟု ၎င်းက ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင်ပြောသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်မှာ တရားစီရင် ရေးကို ကတ္တရာမည်းသုတ်လိမ်းလိုက်သည်နှင့်တူကြောင်း နောက် နောင် ယင်းဖြစ်စဉ်မျိုးထပ်မံမ ဖြစ်ပေါ်ရန်လည်းလိုအပ်ကြောင်း ဥပဒေအကြံပေးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်မြင့်ကပြောသည်။ ”သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် ဒီလိုညွှန်ကြားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမျိုးအမှု လောက်ကို သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်ညွှန်ကြားစရာမလိုဘဲနဲ့ ပြီးရမယ့်အမှုပါ။ ဒါပေမဲ့ သမ္မတကိုယ်တိုင် ဝင်ပါရတယ်ဆို တော့ ကျွန်တော်တို့ တရားစီရင် ရေးဘယ်အဆင့်ထိရောက်နေပြီ လဲဆိုတာကို တွေးကြည့်လို့ရပါ ပြီ။ နောက်နောင်ဒီလိုမျိုးမဖြစ် အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ ဆိုတာကိုလည်း စဉ်းစားဖို့လိုပါပြီ” ဟု ¤င်းကပြောသည်။
အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ခံရသဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင်အောင် ရဲထွေးအမှုတွင် လာရောက်အဖမ်းခံခဲ့သူသုံးဦးကို အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှ ဇူလိုင် ၂၅ ရက်က အမှုပိတ်သိမ်းကာ ပြန်လည်လွှတ်ပေး လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှုကို စတင်စစ်ဆေးစဉ်မှစ၍ တရားလိုဘက်က အမှုကို ရုပ်သိမ်းပေးရေးအတွက် ကျေအေးလွှာကို ခရိုင်တရားရုံးမှ တစ်ဆင့်ဥပဒေချုပ်ရုံးအထိ အဆင့်ဆင့်တင်ပြပြီးနောက် ဥပဒေချုပ်ရုံးက ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၄၉၄(က) အရ အမှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့် ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး နှစ်များစွာကြာဖြတ်သန်းခဲ့သော ရှေ့နေသက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင်မကြားခဲ့ဖူးသော တရားစီရင် ရေးကို ယခုကြားနေရကြောင်းနှင့် ဘယ်အမှုကြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လောက် ဧရာမဟာကြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လောက် ပြစ်ဒဏ်သတ်မှတ်သတ်မှတ် ပြည်သူ အချင်းချင်းကျေအေးတာပဲဆိုပြီး လုပ်ဆောင်ပါက တရားစီရင်ရေး၏မူကို လက်တစ်လုံးခြားသုံးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်နှင့်တွေ့ဆုံစဉ်ပြော ကြားခဲ့သည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းသုံးခုနှင့်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမည်ဟုလည်း သမ္မတက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက် သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေး၏အမှုကို ပြန်လည် စစ်ဆေးရန် ပြည်ထောင်စုဥပဒေ ချုပ်ရုံးက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်ကိုညွှန်ကြားထား ကြောင်း ဦးဇော်ဌေးက ဇူလိုင် ၃ဝ ရက်ကပြောသည်။
မုဒုံမြို့နယ် လမ်းပေါ်တွင်တွေ့ရှိသော ကျောက်နီများမှာ ပတ္တမြားကျောက်နီ မဟုတ်ဘဲ သာမန် လမ်းခင??